Kioba: Ny Maleconazo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Aogositra 2009 4:01 GMT
Feno sahoan-dresaka momba ny hoe ahoana no hamahana ireo olana mampisavoritaka ny nosy amin'izao fotoana izao ireo blaogy Kiobana, hatramin'ny hoe ahoana no fiantraikan'ny tranga tahakahaka izao eo amin'i Kioba 15 taona tany aloha tany. Ny 5 Aogositra dia manamarika ny tsingerintaona faha-15n-n'ny fitraorana lehibe indrindra natrehin'ny governemanta revolisioneran'i Castro hatramin'ny taona voalohany nandresen'ny revolisiona. Ny Maleconazo, araka ny nahafantarana azy, dia nitranga ny 1994 tany amin'ny lalàm-be malaza manamorona ny ranomasina ao Havana, akaikin'ny seranana fiantsonan'ny sambo mpitatitra entana [ferry] mankany Regla.
Eto, anjatony ireo nidina an-dalàmbe raha vao nandre fa hoe navily làlana ireo sambo mpitatitra entana ary dia mitodi-doha ho any Etazonia. Niaraka tamin'ny firodanan'ny Firaisana Sovietika, nitsahatra ny fanampiana avy amin'ny firenena matanjaka iray, niteraka fitotonganana goavana ho an'ny toekarem-pirenen'i Kioba . Lasa ratsy be tokoa ny ara-ekonomika, miharo fahatapahan'ny herinaratra sy tsy fahampian-tsakafo, ary maro amin'ireo tanora ao Kioba – mbola izany no zava-misy hatramin'izao – no miketrika hikopak'elatra ho any U.S., amin'ny fomba rehetra takatry ny sain'izy ireo mba handositra ny tsy fisian'ny anjara-masoandro sy ny fahalalahana ao Kioba.
Ny setrin'izany rehetra izany avy amin'ny governemanta dia ny fandefasana ny hery vonjy taitran'ny fanjakana (departemantam-panjakana misahana ny fandriampahalemana) hiatrika ilay kaongrekasiona [congregation] tao an-tseranana, hiezaka ny hifehy izay mety ho fihoaram-pefy. Izay narahan'ny hetsi-panoherana goavana nataon'ny Kiobana efa nanomboka nikiakiaka hoe: “Fahalalahana; Kioba eny, Castro tsia” sady nifanaritaka tamin'ireo mpitandro filaminana tamin'ny fanehoan'izy ireo ny tsy fahafaliany amin'ny fepetra iainana eo amin'ny nosy. Nanomboka nidina an-dalambe ireo mponin'i Havana, nampakatra ihany ny isan'ireo mpanao fihetsiketsehana. Ny tsy fahafaliana noho ny tsy fahampian-tsakafo sy ireo zavatra hafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro no isan'ny nampakatra ny tosiky ny vilany cocotte-minute; ary dia ‘nipoaka ny sarom-bilany’.
Olana tsy misy hafa amin'izany no manao afon'ampombo eo Kioba ankehitriny, vokatra nateraky ny famèrana ny fanjifàna ireo filàna fototra, ny fanjifàna herinaratra ary ireo tolotra hafa tsy azo ihodivirana. Matoan-dahatsoratra iray no namoaka tao amin'ny blaogy Asociación Pro Libertad de Prensa (Fikambanana ho an'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety), tantanin'ireo mpanao gazety tsy miankina ao Kioba , manao hoe:
Azo ambara fa tena nitotongana be ny tontolo politika, ekonomika ary sosialy eto amin'ny firenena.
Ity ampahany ity dia manao famehezana hoe:
Tonga amin'ny fara-tampony tsy azo ihoarana ny tsy fitokisan'ny vahoaka ny fitantanana…na ny fanantenana aza dia very… ireo vahoaka mijaly miandry vasoka izay ho marika kelin'ny fahitsiana [rationality], na farafaharatsiny fitiavantena kely avy amin'ny governemanta.
Ny Sary nalain'ilay mpizahatany holandey iray Karen Poorts tao Kioba tamin'ny 1994 – toy ireo videos maro tsy voasonia momba io fifanandrinana io izay napetraka ao amin'ny YouTube – dia maneho betsaka vondron'olona vitsivitsy milahatra eny an-dalambe, maneho eny amin'ny endriny (tsy misy tahotra ny amin'izay mety ho fiantraikany) ny tsy fahafaliany amin'ny governemanta.
Ilay mpitoraka blaogy nahazo loka Yoani Sanchez dia nifidy ny handrakitra anaty video ny vohikalan'ny ‘the Maleconazo’, raha toa kosa ireo mafana fo sy mpitoraka blaogy hafa nitatitra momba ireo fepetra noraisin'ny fanjakana ho fisorohana ny Maleconazo hafa indray , na Andro iray ho Fanoherana. Toy izay nitranga roa volana lasa izay, votsa be ny fikorianan'ny aterineto, nitera-pahasahiranana ho an'ireo mpitoraka blaogy avy any Kioba te-handefa sary na tatitra ho an'ireo mpitoraka blaogy any ivelan'i Kioba , dia ireo izay hamoaka ny vaovaon-dry zareo avy eo. Ireo Kiobana mafana fo mpiaro ny zon'olombelona sy ny fahalalahan'ny isam-batan'olona dia noraràna tsy hahazo manao hetsika fahatsiarovana. Ireo mpitandro filaminana avy amin'ny fanjakana dia nampiasa ilay fomba fanao efa tsy zoviana intsony amin'ny fanaovana fahirano ny faritra, hisorohana ny fivoahan'ny olona ao an-tokantranony na handraisany vahiny, eny fa na dia hoe fihaonana kely monja aza.
Somary mahazendana ihany, mitohy ny fanoherana anaty aterineto [online] – farafaharatsiny avy amin'ireo loharano ivelan'i Kioba , – iarahana amin'ny blaogin'i Josan Caballero izay maneho firaisankina amin'ny alalan'ny hetsika iray ao amin'ny Facebook:
Nitsiry tato aminay tamin'ny alalan'ny Facebook ny hevitra. i Joel Riev manolotra hoe androany, fahadimin'ny volana Aogositra, aparitatsika ity video ity, miaraka amin'ireto teny manaraka ireto , izay nataonay ho anay manokana:
‘Soso-kevitro ho an'izay rehetra hamoaka ity video ity amin'ny takelak'izy ireo (blaogy sy ny mombamomba ny tena ao amin'ny Facebook) amin'ity 5 Aogositra ity, aza adino ny fomba nanapahan'izy ireo ny elatsika [elatra+isika]. Tany aho ary dia nosamborin-dry zareo…’
Penultimos Dias (ES) dia manoratra lahatsoratra iray izay manome amin'ny antsipirihany ny fomba fahitàn'ny Kiobana iray Ny Maleconazo, raha mamehy azy toy izao kosa indray ny blaogy sin EVAsión :
Dimiambinifolo taona taty aoriana, tsy tao Levee aho, saingy nomarihako kosa ity andro ity ho ny ohatra iray amin'ireo hetsi-panoherana nataon'ireo Kiobana marobe, izay nanandratra ny fanantenanay fiovàna. Tamin'io andro io dia nino izahay fa efa taka-tànana ny fiafaran'ny jadona. Tsy naniry velively ny handao ny Nosy aho; Nino aho (tamim-panofisana, azoko antoka) fa ilaina bebe kokoa aho eto, ary tena iray ihany amin'ity toerana ity aho ka ny fanoherako dia fomba iray koa ho ahy manokana hanomezako voninahitra sy fanajàna an'i Kioba ary izay no iriantsika rehetra, miampy ireo rehetra nihetsika tamin'iny andro iny. Ry zareo, na aiza na aiza misy azy ireo, dia ohatra velon'ny fahamendrehana. Te-hieritreritra aho hoe maherin'ny 110.000 kilometatra toradroa no misy antsika ara-jeografia…Hoy ry zareo hoe “leo”; tsy dia ilaina loatra ny mamantatra hoe hatraiza ny vokatry ny hetsika: iny no fanehoan-kery farany tamin'ny hetsi-panoheran'ny maroan'isa tao Kioba.
Ny tsikera mahamenatra nataon'i Granma momba ny vaninandro dia manery ahy hisisika amin'ny zo mahakasika antsika: ny 1 Janoary dia mbola azy ihany aloha; ny 5 Aogositra dia (ary izay no ho fandehany) ho antsika.
Ny sarikely nampiasaina tamin'ity lahatsoratra ity, “Pescador en el malecon”, dia avy amin'i Fredo photo, nampiasana ny Creative Commons license. Tsidiho ny Sary mivoaova nataon'i Fredo ao amin'ny flickr .